I-Nandrolone powder (434-22-0) hplc =98% | AASraw steroids powder
/ iimveliso / Anabolics Steroids / I-Nandrolone powder Series / Nandrolone powder
3.50 ngaphandle kwe 5 ngenxa ye 2 amanqaku umthengi
SKU: 434-22-0. iindidi: I-Nandrolone powder Series, Anabolics Steroids
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya ku-order ye-Nandrolone powder (434-22-0), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Ividiyo ye-Nandrolone powder
Nandrolone powder Abalinganiswa
igama: Nandrolone powder
I-molecular Formula: C18H26O2
Ukusetyenziswa kwe-Nandrolone powder kumjikelezo we-steroids
I-Deca-Durabolin yimiqondiso kunye negama lezorhwebo le-anabolic steroid i-Nandrolone powder. Ngokukodwa, i-Deca-Durabolin ligama lezorhwebo le-Nandrolone i-powder Decanoate.
I-Nandrolone Usetyenziso lwefowuni eluhlaza
I-Nandrolone powder eluhlaza i-anabolic steroid. Isebenza ngokunyusa ukukhula kwamathambo athile emzimbeni kwaye iboniswe ekuphuculeni amandla okwenza i-oksijeni ngokwandisa i-hemoglobin kunye nobukhulu beeseli ezibomvu zegazi.
Isilumkiso kwi-Nandrolone powder
Musa ukusebenzisa i-Nandrolone powder ukuba:
unobungozi kunoma isiphi isithako kwi-Nandrolone powder eluhlaza
ukhulelwe okanye uceba ukukhulelwa
Unomdlavuza wesibeletho okanye umdlavuza webele, umhlaza wesifuba kunye namanqanaba aphezulu e-calcium, okanye umonakalo omkhulu wezintso
Xhagamshelana nogqirha wakho okanye umboneleli wezempilo ngokukhawuleza ukuba ngaba kukho enye yale nto isebenza kuwe.
I-Nandrolone powder ingabangela izibilini zesibindi okanye ii-cysts ezigazini kwi-isibindi kunye ne-spleen. Ukuba ziya kwenzeka, ziya kuthi zihambe xa uyeka ukuthatha i-Nandrolone powder eluhlaza. Nangona kunjalo, usenokungazi ukuba unalo kwezi zicubu okanye i-cysts kude kube nzima, mhlawumbi ukuphuma kwegazi kusenzeka kwisisu.
I-Nandrolone powder eluhlaza ingakhokelela ekunciphiseni kwe-cholesterol enhle (HDL) kunye nokwanda kwe-cholesterol embi (LDL). Ezi zinguqu kwi-cholesterol zinokuba nzima kwaye zinokunyusa kakhulu ingozi yakho yokukhula kanzima kwemithambo kunye nesifo senhliziyo.
I-Nandrolone Raw powder
Ukuthengiswa kweNandrolone powder
Indlela yokuthenga i-Nandrolone powder kwi-AASraw
I-Nandrolone Raw powder Recipes: